Myo Kyaw Htun 9:00 am
DAMN !!! လို့ ပြောရင် ဘုရားသီချင်းဖြစ်နေတော့ ရိုင်းများနေမလား ?
MYO HAN HTUN 2:23 pm
သာသနာက မှေးမှိန်လာပါတယ်ဆိုမှ Opacity ထပ်လျော့ချင်ကျသေးတယ်။ လက်အုပ်ချီရမှာလား ထကရမှာလား ဘာလုပ်ရမှာလဲ။
tayzar 2:26 pm
ကျွန်တော်တော့ ကြည့်လို့ မရတော့ဘူးအကိုရေ သူတို့က တစ်ခါလောက်လုပ်လို့ ရတာနဲ့ အားလုံးကို ဖျက်တော့မလို့လား မသိဘူး။
CMS 10:57 pm
စီးပွားရေးသဘောတရားအရ ပြောမယ်ဆိုရင် ပေါ်ပင်တွေလိုက်လုပ်ပြီး သာရေး နာရေး ဘာသာရေးဆိုတာလည်း ထည့်မစဉ်းစားကြတော့ဘူး။ အခုဆို ပြန်ဆိုတေးတွေ ထုတ်လွန်းလို့ အဆိုတော်တွေတောင် သေရမှာ အသေမဖြောင့်ဖြစ်နေလောက်ပြီ ... တကယ်လေတယ်
ဘလူးဖီးနစ် 3:44 am
တော်တော်ကို လွန်လွန်းတယ်ဗျာ။ ... :((